Vehivavy eo amin’ny fandikan-teny, fifanarahanasa sy ny sisa maro! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2019 18:28 GMT
(Lahatsoratra aogositra 2016)
Miarahaba ny mpikambana ato amin'ny GV
Tonga soa ato amin'ny fizarana momba ny Translator Newsletter! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Ny vehivavy ao amin'ny iray volan'ny fandikan-teny
Pikantsary avy amin'ny http://www.wordswithoutborders.org/
Raha ny fahalalako azy, dia toa Volan'ny Vehivavy eo amin'ny Fandikan-teny ny volana Aogositra! Fantatro fa efa faha-22 ny volana izao, saingy mbola manana fotoana hankalazana izany isika! Jereo ity lisitra avy amin'ny Teny mihoatra Sisintany ahitana ireo mpanoratra vehivavy 31 manerana izao tontolo izao ity ary raha manana torolàlana tianao zaraina ianao, dia afaka mandefa izany amin'ny tenirohy #WITmonth!
Andro iray teo amin'ny fiainan'ny mpandika teny GV
Pikantsary avy amin'nyhttp://hooddanelle.wix.com/
Danelle Hood, izay mpianatra asa tao amin'ny vondrona mpandika teny Espaniola mankany amin'ny teny Anglisy ao amin'ny GV, nanoratra lahatsoratra mahafinaritra antsoina hoe “Avy ao amin'ny Biraon'ny Mpandikatenin'ny Global Voices iray”, manazava amintsika ny zavatra niainany. Nanoratra tolo-kevitra mahasoa maro ho an'ireo mpandika teny hafa izy ary nitanisa loharano tena tsara izay azontsika rehetra ampiasaina, na inona na inona vondrona fiteny misy antsika. Vakio ato izany!
Pikantsary avy amin'ny https://www.tm-town.com
TM-Town nizara boky antserasera maimaim-poana “Mpandika teny Manam-pahaizana Manokana miisa 8 Mizara Torohevitra, Toro-lalana, sy Fampitandremana amin'ny Fifanarahanasa Vaovao”. Raha vao manomboka toy ny mpandika teny mahaleotena ianao ary miady mafy amin'ny fiaharamiasa amin'ny sampan-draharaha na mifampiraharaha fifanarahana, topazo maso ato ity boky ity!
Dubbing vs. Subtitling (Ny fandikàna vs. fanomezana dikantsoratra)
Pikantsary avy amin'ny http://www.traductanet.com/
Ny fandikana sy ny fanomezana dikantsoratra dia samy ampiasaina eo amin'ny indostrian'ny sarimihetsika mba handikana ny votoatin'ny horonam-peo sy sary. Saingy tsara kokoa noho ny iray hafa ve ny dingana iray? Inona no very amin'ny fandikana eo amin'izy roa? TraductaNet namaly ireo fanontaniana ireo ary maro kokoa ao anatin'ity lahatsoratra mahafinaritra ity. Toa hita fa any amin'ny firenena sasany, aleo mampiasa ny fomba iray ary ilaina amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fomba tsara indrindra handikana izany ihany koa ny karazana votoaty. Vakio raha liana momba ny fiasan'io dingana io!
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia tsidiho ao amin'ny mailaka marianna@globalvoices.org aho azafady.
Raha sambany mamaky ity gazety ity ianao ary te hiaraka amin'ny Global Voices, dia lazao anay bebe kokoa eto ny momba anao!